iHelp version2- Man Down System - တစ်ယောက်တည်းအလုပ်သမား ၀ န်ထမ်းများအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် | OMG Solutions
စာရွက်များ, ခရီးစဉ်နှင့်ကျရောက်အများအပြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအနှံ့အလုပ်ခွင်မတော်တဆမှု၏အကြီးမားဆုံးအကြောင်းရင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ အမြင့်ထံမှကျသွားသို့မဟုတ်ဝါယာကြိုးများနှင့်အခြားအန္တရာယ်အပေါ် tripping ပဲဖြစ်ဖြစ်, သင့်န်ထမ်းရန်အလေးအနက်ဒဏ်ရာနှင့်ပင်သေဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကျရောက်ပါတယ်။ တစ်ဦးကျဆုံးဖြစ်ပျက်သည့်အခါကို သိ. နှင့်ချက်ချင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီများပေးပို့ခြင်းအသေးစားဒဏ်ရာများနှင့်တဦးတည်းပြောင်းလဲနေတဲ့ဘဝအကြားကွာခြားချက်ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့သင့်ရဲ့န်ထမ်းတစ်ဦးတည်းအလုပ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်မျက်မှောက်နှင့်အသံထွက်လျှင်? သူတို့ဒဏ်ရာရကြသည်ဆိုပါကသူတို့ဘယ်လိုနှိုးဆော်သံမြှင့်နိုင်သလဲ က Man ချနိုးစက်နှင့်စက်ကိရိယာများထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများများအတွက် ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လာရသည်။
iHelp 2.0 ၀ န်ထမ်း GPS Tracker ကိရိယာ တစ်ဦးကျဆုံးလည်းမရှိသည့်အခါ real-time, အလုပျသမားမြား၏ status ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်, 2.0 ကိုကူညီပါ အကူအညီချက်ချင်းပေးအပ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလိုအလျှောက်, အခြားသူတစ်ဦး၏မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်တပ်လှန့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
ဆောက်လုပ်ရေး၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ပြtransportation္ဌာန်းချက်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစသည့်အန္တရာယ်အရှိဆုံးသောကဏ္inများတွင်လုပ်ကိုင်နေသော ၀ န်ထမ်းများအတွက် Aware 360 ​​သည် ၀ န်ထမ်းများ၏လုံခြုံမှုကိုအပြည့်အဝပေးထားပြီး၊ ဂြိုဟ်တု (GPS) ကိရိယာများ၊ စမတ်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် ၀ တ်ဆင်ဆင်ယင်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထူးခြားသောအခြေအနေတစ်ခုစီအတွက်မှန်ကန်သောနည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသည်။
Web & Smartphone APP tracking Platform ကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာ၊ တက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းကိုသုံးခြင်းဖြင့်သင်၏စက်တည်နေရာ (သမိုင်းကြောင်းအရ / အချိန်နှင့်တပြေးညီ) နေရာကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
1 ။ ကမ္ဘာကြီးကိုအသေးဆုံး 3G (WCDMA) ပုဂ္ဂိုလ်ရေး / ပိုင်ဆိုင်မှု GPS စနစ် tracker ။
2 ။ တစ်ဦးက docking station ကိုအားသွင်းနှင့်ကအများကြီးမြန်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန်တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းပေးပါသည်။
3 ။ ဂျီပီအက်စ်ဂြိုဟ်တုအားဖြင့်ရီးရဲလ်အချိန်ခြေရာခံခြင်း။
5 ။ AGPS, 30 စက္ကန့်အတွင်း TTFF (GPRS များအတွက် 10 စက္ကန့်ပါဝင်သည်) ။
6 ။ ကလေးများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ, စိတ်ရှည်ဘို့နှိုးဆော်သံကိုဆင်း Fall ။
7 ။ built-in တုန်ခါမှုအာရုံခံကိရိယာ။
8 ။ အားပြန်သွင်းနိုင် 900 mah လီသီယမ်ဘက်ထရီအတူ။ standby အချိန်: 10 ရက်။
9 ။ built-in 3D, G-sensor ကိုရွေ့လျားမှု, ထိတ်လန့်နှိုးဆော်သံနှင့်အာဏာစီမံခန့်ခွဲမှု၏။
10 ။ Voice ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု။
11 ။ နှစ်ဦးကလမ်း Voice ကိုဆက်သွယ်ရေး။
12 ။ ဒေတာများသစ်ထုတ်လုပ်ရေး: 60000 နေရာများတွင်။
14 ။ လေထုကျော် firmware အဆင့်မြှင့်။
15 ။ လက်ရှိအနေအထားများမြေပုံ link ကို Reply ။
16 ။ အရေးပေါ်အရေးပေါ်ခလုတ်ကို။
17 ။ မြန်နှုန်းနှိုးဆော်သံကျော် Geo-ဇုန်နှိုးဆော်သံ။
18 ။ လပ်ြရြားမြနှိုးဆော်သံ။
19 ။ ဦး-blox GPS စနစ်နည်းပညာ။
အားလုံး non-အမြတ် အစိုးရ အခြားသူများက ပညာရေး
3841 စုစုပေါင်း Views စာ9Views စာယနေ့တွင်